Worraaqsi bilisummaa Oromiyaa keessa babal'ataa fi qabeenni Woyyaanee Qeerroo Oromoon gubataa jira - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Worraaqsi bilisummaa Oromiyaa keessa babal’ataa fi qabeenni Woyyaanee Qeerroo Oromoon gubataa jira
Worraaqsi bilisummaa Oromiyaa keessa babal’ataa fi qabeenni Woyyaanee Qeerroo Oromoon gubataa jira
Oromoon hundi dirqama ganda isaa bilisoomsuu kan fudhate fakkaata
Fincilli xumura gabrummaa Finfinnee seenee jira. Finfinneen cinaan cufamtee, gara biraatiin ammoo sodaa fi cinqii takkaa argitee hin beekneen liqimfamteeti kan oolte. Magaalonni naannawa Finfinnee dirree qabsooti. Magaalaa Sabbataa, Almaganaa, Tulluu Boolloo, Asgorii keessatti qabeenyi Woyyaanee fi lukkeeleen isii saamichaan wolitti qabate dargaggoon Ooromoo ibidaan daqqiiqatti daaraa goote.
Yunivarsiitonni heddu keessatti sochii cimatu geggeffamaa jira. Yunivarsiitiin Jimmaa, Haramaayaa fi Hawaasaa keessatti barattoonni saba hedduu wolitti dhufanii sirna Woyyaanee balaaleffataati kan jiran.
Har’as guutummatti Oromiyaan dirree qabsoo taatteti kan oolte. Bakka hundatti daandiin kan cufame, sochiin diinagdee kan dhabame. Magaalaa fi baadiyaa hunda keessatti qabeenyi mootummaa ni manca’a. Iddoo hundatti warshaa fi qonni Woyyaanee fi lukkeelee isii ibiddaan boba’a. Magaalaa heddu keessatti kan ummanni mana hidhaa cabsee hidhamtoota gadi lakkisiise. Bakka hundatti kan seenaan barreeffamaa jiru.
Sochii kana irratti, akkuma kana duraa, namoota heddutu wareegamaa jira.
Sochiin ummataa sadarakaa ol’aanaa irra gayuu isaa wantoonni mirkaneessan baay’ataa dhufaniiru. Humna tikaa jiddutti wolitti gaarreffachuu fi wolsodaachuu bira dabramee gara qawwee wolitti baafachuutti geeddarameera. Guyyuma har’aa magaalaa Shaashamanneetti worraanni Woyyaanee sabaan wolqoodee (Oromoo fi Tiigreen) wolrukutuun barameera. Namni meeqa akka du’e ammatti hin beekamu. Dhimmi akkanaa kufaatii mootummaa agarsiisa. Humna wworaanaa fi isaan biraa Woyyaanee tajaajilaniif ergaa guddaa dabarsa. Kanaan dhimmi akanaa iccitiin guddan kan qabamuuf. Dhiimmi guddichi Woyyaanee yaachisuu fi hirriba malee isii bulchu yoo woraanni sabaan wolqoodee wolrukutuu fi ajaja gubbaa dabru didaa bira kutuudha. Kuni ta’uu erga egalee bubbuleera.
Achuma Godina Arsii Lixaa magaalaa Qoretti ummanni humna Agaazii lama ajjeesse magaalaa isaa diina ajjeesaa irraa qulqulleesse.
Sochii har’aa fi kaleessaa ilaalchiseee namni dubbifne tokko, ‘Gubata ganna 25 bayaara jechuun alatti kan ummanni itti jiru bifa biraan ibsuun hin danada’amu,’ nuun jedhe. Namni kuni gootummaa fi murannoo saba isaa dinqisiisfata. Tokkummaa akkanaa akka takkaa hin argine dubbata.
Hundi Oromoo, magaalaa fi baadiyatti, dirqama ganda isaa bilisoomsuu, qabeenya saamame harka diinaatii buusuu qaba. Gatii fedhes yoo kan nukkaffalchiisuu hujiin gabrummatti xumura laatuu cimee itti fufuu qaba. Yeroo hunda booya, gaddaa fi saamamaa jiraachuun NU GAYE! Sa’aa kanatti kan godhuu qabnu fira du’e awwaalataa, isa madaaye yaalataa, diina irraa hiikkataa irree tokkummaan qabsoo eegalame finiinsuudha.
Previous articleAjjeechaan Bishooftuu Oromoo dallansiisee ummanni daanditti bayee qabeenya Woyyaanee akka mancaasu taasise
Next articleFincilli ummataa Itoophiyaa raasaa jira, jedha Reuters